Singapore manana pasipaoro tsara indrindra hitety an'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Singapore no manana pasipaoro tsara indrindra hitety an'izao tontolo izao
Maria | | Singapore, Tsangatsangana
Sary | AsiaOne
Ny iray amin'ireo ahiahin'ireo mpandeha mandritra ny fialan-tsasatra any ivelany dia ny hoe mila visa hidirana amin'ny firenena sasany sy ny fomba ahazoana izany izy ireo amin'ity tranga ity. Ny fananana pasipaoro dia tsy manome antoka foana fa afaka mandeha tongotra any amin'ny firenena hafa isika satria miankina amin'ny ohatrinona ny fifanarahana roa tonta ananan'ny fiaviana sy ilay itodiana. Amin'izany fomba izany, ny pasipaoro sasany dia ho tsara kokoa ny mahita an'izao tontolo izao noho ny hafa satria miaraka aminy, varavarana misokatra kokoa no misokatra amin'ny fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina na ny fitaratry ny fifindra-monina.
Araka ny fanavaozana ny Index Passport nomanin'ny mpanolotsaina ara-bola manerantany Arton Capital (izay miandraikitra ny fanoroana hevitra ireo olona te-hahazo fahazoan-dàlana hipetraka sy zom-pirenena) Ny pasipaoro any Singapour no matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao raha ny momba ny dia tsy mila taratasy intsony. Ny laharana dia mahatonga ny fanasokajiana azy miorina amin'ny isan'ny firenena eto ambonin'ny planeta azon'ny mpandeha tsidihina tsy misy visa.
Nihanika toerana ao anaty lisitra i Singapaoro taorian'ny nanapahan-kevitr'i Paraguay ny fanafoanana ireo fameperana izay napetrany hatramin'ny mponina ao amin'ny firenena Aziatika. Aorian'ny fanovana dia afaka miditra amin'ny firenena 159 izy ireo izao raha tsy misy visa. Fa firenena inona avy no mameno ny toerana voalohany amin'ny laharana?
1 Inona no atao hoe pasipaoro ary inona no ilana azy?
2 Ahoana no anaovana ny lisitra?
3 Inona avy ireo mason-tsivana manatsara ny pasipaoro?
4 Azo atao ve ny mividy pasipaoro?
5 Curiosities momba ny pasipaoro
5.1 Iza no namorona ny pasipaoro?
5.2 Inona ny haben'ny pasipaoro?
5.3 Sary hialana amin'ny fisandohana
5.4 Ny pasipaoro tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny dia
Inona no atao hoe pasipaoro ary inona no ilana azy?
Izy io dia antontan-taratasy ofisialy navoakan'ny firenena iray fa manan-kery iraisam-pirenena. Ny endrika kahie dia nalaina tamin'ny andro taloha izay nanoratan'ny fahazoan-dàlana tanana. Amin'izao fotoana izao, noho ny elanelana ara-teknolojia, ny pasipaoro miendrika boky dia manohy ny rafitra tena ilaina indrindra, na dia manana an'io puce mora vakiana io aza izy ireo. Amin'ny ankapobeny Izy io dia manaporofo fa izay mitondra azy dia afaka miditra sy miala amin'ny firenena satria omena alalana hanao izany izy ireo na toy ny marika iray izay eken'ny fireneny izany Fanjakana izany.
Ahoana no anaovana ny lisitra?
Mba hanaovana izany lisitra izany, ireo firenena mpikambana 193 an'ny ONU dia raisina an-tsaina, ary koa Hong Kong, Palestine, Vatican, Macao ary Taiwan.
Ny pasipaoro Singaporeana no fotoana voalohany nahaizany nitana ny laharana voalohany ary firenena voalohany nahavita izany. Zava-dehibe niheverana fa nahaleo tena izy ireo nandritra ny am-polony taona vitsivitsy ary, tsy toy ireo firenena mandrafitra ny faritanin'i Schengen, i Singapore irery no mandray fanapahan-kevitra sasany nefa tsy miankina amin'ny vondrona iray.
Singapore dia mety mifamatotra amin'ny ASEAN (Fikambanan'ny firenena Azia atsimo atsinanana) saingy aleon'izy ireo miala amin'izany.
Ireto no firenena manana pasipaoro izay anananao ny fitaovana tsara indrindra handehanana any ivelany:
Suède sy Korea atsimo 157
Danemarka, Italia, Japon, Espana, Failandy, France, Angletera ary Norvezy 156
Luxembourg, Portugal, Belzika, Holland, Suisse ary Aostralia 155
Etazonia, Irlanda, Malezia ary Kanada 154
Nouvelle Zélande, Aostralia ary Gresy 153
Islandy, Malta ary Repoblika Tseky 152
Latvia, Polonina, Litoania, Slovenia ary Slovakia 149
Inona avy ireo mason-tsivana manatsara ny pasipaoro?
Raha ny filazan'ny consultants any London, Henley & Partners, ny fahafahan'ny firenena mahazo fanavahana visa dia taratry ny fifandraisany amin'ny firenena hafa. Toy izany koa, ny fepetra takiana amin'ny visa dia voafaritra ihany koa amin'ny fifandimbiasan'ny visa, ny risika amin'ny visa, ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana ary ny fandikana ny lalànan'ny fifindra-monina.
Azo atao ve ny mividy pasipaoro?
Raha azo atao. Ny orinasa izay nanomana ny lisitra dia manampy ireo izay te hanana pasipaoro faharoa manararaotra kokoa hanokatra varavarana mitady firenena izay ahazoana pasipaoro azo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola. Mazava ho azy, ny vola ampidirina dia tsy ho latsaky ny 2 sy 15 tapitrisa dolara.
Raha ny mahazatra, ny olona avy amin'ny firenen-kafa izay mitady pasipaoro tsara kokoa dia avy amin'ny toerana izay teritery raha ny fahazoana visa toy ny Moyen Orient, Sina na Russia.
Curiosities momba ny pasipaoro
Iza no namorona ny pasipaoro?
Ao amin'ny Baiboly dia misy lahatsoratra izay miresaka momba ny antontan-taratasy iray izay nanome alalana ny mpitondra azy hitety toerana iray, fa tany Medieval Europe kosa no nanombohan'ny fisian'ireo antontan-taratasy namela ny olona hiditra tanàna sy amin'ny alàlan'ny fidirana sasany.
Na izany aza, ny famoronana pasipaoro ho toy ny antontan-taratasy famantarana ny sisintany dia nomena an'i Henry V avy any Angletera.
Inona ny haben'ny pasipaoro?
Saika ny pasipaoro rehetra dia 125 × 88 mm ny habeny ary 32 eo ho eo ny ankamaroany.e, pejy 24 eo ho eo ihany no atokana ho an'ny visa ary raha lany ny taratasy dia ilaina ny mangataka iray vaovao.
Sary hialana amin'ny fisandohana
Mba hisorohana ny fisandohana dia sarotra ny fanaovana ny sarin'ny pejin'ny pasipaoro sy ny ranomainty. Ohatra, raha ny momba ny pasipaoro Espaniôla, ny fonony aoriana dia mampiseho ny fitsidihany voalohany an'i Columbus tany Amerika, raha ny pejy visa kosa dia mampiseho ny fifindra-monina biby mahavariana indrindra eto an-tany. Raha miresaka momba an'i Nikaragoà isika, ny pasipaoronao dia manana endrika fiarovana 89 isan-karazany izay manasarotra ny fanaovana hosoka.
Ny pasipaoro tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny dia
Ny firenena sasany toa an'i Alemana, Suède, Espana, Angletera na Etazonia dia manana pasipaoro tena tsara hitety an'izao tontolo izao satria afaka miditra amin'ny fanjakana 150 mahery izy ireo. Mifanohitra amin'izany aza, ny firenena toa an'i Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Libya, Sudan na Somalia dia manana pasipaoro mpandeha kely indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Singapore » Singapore no manana pasipaoro tsara indrindra hitety an'izao tontolo izao
Mahalalà an'i Irlandy afaka 8 andro manomboka amin'ny 344 euro
Ny sestieri 6 an'ny Venice izay tokony ho fantatrao amin'ny dianao